काठमाण्डौमा प्रहरीलाई हैरानी बनाउने यी घटना, सुरक्षा अंगका प्रमुखले पनि माने दु:ख ! – Jagaran Nepal
काठमाण्डौमा प्रहरीलाई हैरानी बनाउने यी घटना, सुरक्षा अंगका प्रमुखले पनि माने दु:ख !
काठमाडौं – सरकारले चैत ११ चैतदेखि जारी गरेको लकडाउनलाई विहिवार देखि काठमाडौंमा केही खुकुलो बनाएको छ । सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाएपनि नीजि सवारी साधन चलाउन पाउने र पैदल एक्लै हिड्नेलाई अवरोध नगर्ने निर्णय गर्यो । असार १ देखि सरकारी कार्यालय २ सिफ्टमा खुल्ने र ब्यवसायीहरुले पनि पसल सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गर्यो ।
नीजि सवारी साधन चलाउँदा पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन र जोर विजोर प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दियो । तर मोटरसाइकल र स्कुटर लगायत दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि भने जोर विजोर लागू हुँदैन । तर मोटरसाइकलमा एक जना अर्थात चालक मात्र बस्न पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सरकारको निर्णय संगै सामाजिक सञ्जालमा केहीले विरोध जनाए । अधिकांशको घरमा एउटा मोटरसाइकल हुन्छ । सोही मोटरसाइकल प्रयोग गरेर श्रीमान श्रीमती अफिस जान्छन् । तर सरकारले मोटरसाइकलमा चालक मात्र बस्न पाउने नियम लगाएपछि त्यसको विरोध भएको हो । सडकमा एउटै मोटरसाइकलमा दुई जना चढेको देखिएपछि ट्राफिक प्रहरीलाई हैरान भयो ।
यसै क्रममा सुरक्षा अंगका प्रमुखले सरकारले बिहीबारबाट लागू हुने गरी बनाएको लकडाउनको नयाँ मोडालिटीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निर्णयमा केही सुधार गर्न सुझाएका छन् । गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुन्धान विभागका प्रमुखले लकडाउनको परिवर्तित मोडालिटीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निर्णयलाई व्यवहारिक बनाउन सुझाएका छन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगको छलफलमा सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुले मोटरसाइकलमा सवार व्यक्तिहरुका हकमा भएको निर्णय सबैभन्दा अव्यावहारिक देखिएको बताए । उनीहरुले सरकारी निर्णय आएलगत्तै प्रहरीले सडकमा हैरानी व्यहोर्नुपरेको, कतिपय स्थानमा प्रहरी र मोटरसाइकल चालकका बीचमा भनाभनको स्थितीसमेत देखिएको गृहमन्त्री थापासँग गुनासो गरेका छन् ।
अधिकांश मोटरसाइकलमा श्रीमान श्रीमती चढेको देखेपछि ट्राफिकले त्यसरी २ जना चढ्न नपाइने भन्दै रोक्यो । कसैले विरामीलाई पछाडी राखेर पनि अस्पताल लैजादै गरेको देखेपछि ट्राफिकलाई धर्म शंकट परेको छ । यस्तैमा काठमाडौंको कोटेश्वमा स्कुटरमा दुई जनालाई देखेपटि ट्राफिकले रोक्यो । युवा युवती श्रीमान श्रीमती थिए । प्रहरीले रोकेपछि केहीबेर चर्काचर्की पनि भयो । उनीहरु एउटै अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी थिए । प्रहरीले रोकेपछि आफुहरुको बाध्यता रहेको भन्दै उनीहरु प्रहरीसंग विवादमा उत्रिए । प्रहरीले पनि सरकारको निर्णय सुनाउँदै आफ्नो पनि बाध्यता भएको बताए । केहीबेरको विवाद पछि प्रहरीले उनीहरुलाई छोडिदियो ।
शुक्रवार दिनभरी ट्राफिक प्रहरीले सडकमा यस्तै समस्या झेलिरहे । कोही एउटै बैंकमा काम गर्ने कर्मचारी, कोही स्वास्थ्यकर्मी । यस्तो देखिएपछि प्रहरीले मानवताका कारण पनि सरकारी निर्णय उल्लंघन गर्नुपर्ने बाध्यता परेको छ । ट्रफिक प्रहरीले मोटरसाइकल रोकेपछि उनीहरुको एउटै प्रश्न हुन्छ श्रीमान्–श्रीमती आफ्नो मोटरसाइकलमा चढ्न नपाउने यो के नियम हो ?